China Concrete Mixing Pump Truck Eji Slewing Ring Bearing factory na ndị na-emepụta ihe |Wanda
Ihe na-egbu egbu
Otu Ahịrị gafere Roller Slewing Bearing
Otu Ahịrị anọ ntụpọ kọntaktị bọọlụ egbu egbu
Mgbaka bọọlụ ahịrị okpukpu abụọ
Ahịrị atọ nke Roller Slewing Bearing
Akụkụ dị mkpa na-ebu igbu egbu
Ụdị Flange Slewing Bearing
Ugboro abụọ Worm Slewing Drive F...
17 "Slewing Drive Maka...
Wanda High Quality Slewing...
Ụdị ọkụ na-ebu nke ọma...
Ụdị ọkụ na-ebu ọkụ ...
Ụgbọala mgbanaka na-agwakọta ihe ejiri mee ihe mgbanaka mgbanaka
Enwere ọtụtụ ụdị gwongworo mgbapụta, dị ka: konkịtị mixing pump truck, boom pump truck, mobile pump truck, flood control mobile pump truck, etc.;gwongworo mgbapụta ndị a enweghị ikewapụ na mpaghara nnyefe dị oke mkpa:na-egbu egbu mgbanakaibu.
Nkeigbu egbubụ akụkụ atọ mejupụtara: mgbanaka dị n'ime, mgbanaka mpụta, na ihe na-atụgharị.Ọ nwere ike iburu nnukwu ibu n'otu ogeike axial, ike radial na oge ụfọdụ tilting.Ọ bụ ebumnuche n'ozuzu oke nke nwere arụmọrụ zuru oke.Mgbanaka mgbanaka nke ime na mpụta nwere bolts ike dị elu nke edobere n'okirikiri ntụgharị ma ọ bụ chassis.
Na nhazi usoro nkeigbu egbunke ihe mgbapụta gwongworo, dị ka ahụmahụ na ngụkọta oge na-adịbeghị anya, anyị n'ozuzu na-ahọrọrotary table igbu egbu, nke nwere ike iburu ibu axial buru ibu na oge nkwụsịtụ.Ntugharị egbugbere ọnụa na-ekewakarị ụzọ abụọ:Naanị otu bọọlụ ahịrịigbu egbunaNaanị otu ahirioberola na-egbu egbu.
Xuzhou Wanda na-egbu egbuenyelaegbu egbu bearingsmaka ndị a ma ama n'ime ụlọ na ndị mba ọzọ na-emepụta ụgbọala mgbapụta, ma nwee ahụmahụ bara ụba.Ọ bụrụ na ị chọrọegbu egbu bearingsmaka ụgbọ ala mgbapụta, bikokpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: XZWD na-egbu egbu maka AWP (elu ikpo okwu ọrụ ikuku)
Osote: Ụgbọ ala krane ejiri mgbanaka na-egbu egbu
1. Anyị n'ichepụta ọkọlọtọ bụ dị ka igwe ọkọlọtọ JB / T2300-2011, anyị na-a hụrụ nke ọma Quality Management Systems (QMS) nke ISO 9001: 2015 na GB / T19001-2008.
2. Anyị na-etinye onwe anyị na R & D nke ahaziri slewing amị na elu nkenke, pụrụ iche nzube na chọrọ.
3. Site n'ọtụtụ akụrụngwa na mmepụta dị elu, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ndị ahịa ngwaahịa ngwa ngwa o kwere mee ma belata oge maka ndị ahịa na-echere ngwaahịa.
4. Njikwa dị n'ime anyị na-agụnye nyocha mbụ, nyocha nke otu, njikwa njikwa na-arụ ọrụ na nlele nlele iji hụ na ngwaahịa dị mma.Ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwá ọrụ nyocha zuru oke na usoro nyocha dị elu.
5. Ndị otu ọrụ na-ere ahịa siri ike, na-edozi nsogbu ndị ahịa n'oge, iji nye ndị ahịa ọrụ dị iche iche.
Ihe na-akpata crane Slewing Bearing
gwongworo mgbapụta eji mgbanaka egbu egbu
mgbanaka igbu egbu
Mgbanaka na-egbu egbu
Obere mgbanaka egbu egbu
Mgbanaka eze na-egbu egbu
Ogbugbu egbu egbu
XZWD 011.60.2800 Mpụga Gear Otu Ahịrị bọọlụ ...
XZWD otu ahịrị bọọlụ nwere mma tapered slewing rin...
XZWD otu ahịrị bọọlụ na-ebu turntable ...
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.